पारिश्रमिकको पिरलो - मनोरञ्जन - नेपाल
अनमोल केसी अभिनीत कृले ९५ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्‍यो । लगत्तै अर्को फिल्म ए मेरो हजुर ३ मा ५० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिए । दुई वर्षअघि कृबाट अनमोलले २५ लाख रुपैयाँ पाएका थिए ।
अहिले अनमोलको जस्तै हाईहाई थियो, कुनै बेला आर्यन सिग्देलको । तर एउटै प्रकृतिका फिल्म खेलेपछि उनको लोकप्रियता खस्कँदै गयो । फिल्म पाउनै छाडे, पाएका पनि फ्लप भए । क्लासिक, होमवर्क यसका उदाहरण हुन् । आफ्नै लगानीमा कायरा खेले । बक्स अफिसमा चिप्लियो । न त आर्यनको अभिनयले तारिफ पायो । तैपनि, उनले हाल निर्माणाधीन चलचित्र हजार जुनीसम्ममा १२ लाख रुपैयाँ पाए ।
कायरामा साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह पनि थिइन् । त्यसअघि साम्राज्ञी अभिनीत फिल्म तिमीसँग डुबेको थियो । इन्टु मिन्टु लन्डनमाको व्यापार औसत रहे पनि साम्राज्ञीले होइन, नवअभिनेता धीरज मगरले जस पाए । यो खराब ‘ट्याक रेकर्ड’ ले साम्राज्ञीको पारिश्रमिकमा कुनै असर परेन । बरु नयाँ फिल्म मारुनीमा १६ लाख लिइन् । कायरामा १० लाख रुपैयाँ पाएकी थिइन् । पूजा शर्मा अभिनीत रामकहानीले लगानी उठाउन सकेन । तर १५ लाख रुपैयाँ लिएर सम्हालिन्छ कहिले मनमा अनुबन्ध भइन् । अहिले यसकै सुटिङका लागि बेलायत पुगेकी छन् ।
एकातिर नेपाली फिल्मको व्यापार मात्र होइन, गुणस्तर पनि खस्कँदो छ । अर्कातिर कलाकारको पारिश्रमिक चुलिँदो छ । अहिले नेपाली फिल्मको औसत बजेट १ करोड ५० लाख मानिन्छ । यस हिसाबले कलाकारको पारिश्रमिकमै आधा लगानी सकिन्छ । फिल्मको व्यापारचाहिँ गिर्दो छ ।
यस वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ । यसबीच झन्डै ८० फिल्म प्रदर्शन भए । तर मुनाफा आर्जन गर्ने छक्का–पञ्जा ३, जय भोले र नाइँ नभन्नु ल ४ मात्र । अरू आधा दर्जन फिल्मले जसोतसो लगानी उठाए । नेपाली डायस्पोरामा समेत फिल्मको माग घट्दो छ । व्यापार यति दयनीय छ तर सीमित कलाकारको भाउचाहिँ ज्यामितीय रूपमा बढिरहेको छ । यही रापका बीच निर्माता र हल सञ्चालक प्रदीप के उदयले फेसबुकमा लेखे, ‘कलाकार पारिश्रमिकको भाउ बढेको बढ्यै, हलमा दर्शक घटेको घट्यै ।’
उसो त, बक्स अफिसमा सुक्खा लाग्दालाग्दै पनि फिल्म निर्माणमा कमी आएको छैन । प्रत्येक साता घटीमा दुई नयाँ फिल्म घोषणा हुन्छन् । तर फिल्मको कन्टेन्ट र मेकिङबारे चर्चै हुँदैन । चर्चा हुन्छ त केवल कुन कलाकारलाई कति पैसा दिइयो ? कलाकार मात्र होइन, निर्माता पनि त्यस्तै हल्लामा मस्त हुन्छन् । तर ती कलाकारका पछिल्ला फिल्मको व्यापारलाई निर्माताले ख्यालै गर्दैनन् । वितरणमा समेत आबद्ध उदय भन्छन्, “बजारको गहिरो विश्लेषण गरेका निर्माताले कुनै कलाकारलाई ४०–५० लाख रुपैयाँ दिनै सक्दैनन् ।”
यसो भन्नुको कारण छ उनीसँग । जस्तो, ४० लाख कुनै कलाकारलाई दिइयो भने त्यति रकम कमाउन फिल्मले १ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गर्नुपर्छ । उदय प्रश्न गर्छन्, “त्यत्तिको व्यापार गर्ने स्टारडम कुन नेपाली हिरो/हिरोइनको छ ?”
अनमोलपछि सबैभन्दा महँगो पारिश्रमिक लिने हिरो हुन्, प्रदीप खड्का । तर उनका कुनै पनि फिल्मले उल्लेखनीय नाफा कमाउन सकेका छैनन् । उनी चम्किएको फिल्म प्रेमगीतले जेनतेन लगानी बचायो, त्यसपछि प्रेमगीत २ र लिलीबिली खेले । यी फिल्मका निर्माताले पनि राहत पाएनन् । रोजी त पूरापूर फ्लप नै भयो । यस फिल्मबाट उनले २५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । तर प्रदीपलाई अफरको ओइरो छ । उनले चाहने हो भने ४०–५० लाख रुपैयाँ सहजै पाउँछन् । उसो त, फिल्म नचलेपछि रोजीकै निर्माताले दिएको १० लाखको चेक नसाटिएर तनाव छ उनलाई । रोजीका अन्य कलाकार पनि पूरा पारिश्रमिक नपाएको दुखेसो गर्छन् ।
स्टारडम भएका कलाकारले महँगो पारिश्रमिक लिनु अनौठो होइन । बलिउडमा पनि यस्तै हुन्छ । तीन खानले एउटै फिल्मबाट करोडौँ लिएको खबर आउँछन् । बलिउड र हामीकहाँ तात्विक अन्तर छ । आमिरकै उदाहरण लिऔँ । उनले सुरुको सुटिङमा पैसा लिँदैनन् । आफूलाई छुट्याएको रकम पनि फिल्मको गुणस्तर वृद्धिमा खर्चिन सुझाउँछन् । तर उनले फिल्म हिट भयो भने आधा हिस्सा दाबी गर्छन् । निर्माताको लगानी उठेन भने पारिश्रमिक पाउँदैनन् ।
ठग्स अफ हिन्दोस्तान फ्लप भयो । आमिरले पैसा लिएनन्/पाएनन् । रेस ३ मा सलमानले त्यही गरे । निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरी प्रश्न गर्छन्, “हामीकहाँ पारिश्रमिक नलिने तर नाफाको सेयर दाबी गर्ने कलाकार कोही छन् ? त्यसका लागि कलाकारमा आफ्नो क्रेजले फिल्म हिट हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ ।” उनी कलाकारको वास्तविक लोकप्रियता त्यही बेला मापन हुने दाबी गर्छन् । त्यसो हो भने कृबाट अनमोल र रोजीबाट प्रदीपले फ्लपको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?
पारिश्रमिक लिने मामलामा गिरीले बलिउडका खानहरूको शैली अपनाएका छन् । उनी अभिनीत आधा दर्जन फिल्म ब्लकबस्टर भए । यतिबेला रोहित अधिकारीको निर्माणमा बन्ने फिल्ममा काम गर्दैछन् । स्क्रिप्ट पनि उनकै हुनेछ । अहिले पारिश्रमिक लिएका छैनन् । गिरी भन्छन्, “फिल्म हिट भएपछि नाफाको कम्तीमा ५० प्रतिशत र अनलाइन राइट लिन्छु । निर्माताको लगानी उठेन भने एक रुपैयाँ लिन्नँ ।” यसो हुँदा फिल्मप्रति आफ्नो दायित्व र प्रेम बढ्ने बुझाइ छ, उनको ।
महँगो पारिश्रमिक लिएका कति कलाकारले पर्याप्त समय नदिएर तड्पने निर्माता धेरै छन् । सुटिङ र प्रमोसनमा दु:ख दिएपछि धेरै निर्माताको कलाकारसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । “सबै कलाकारमा आफू चलेका बेला धेरै पारिश्रमिक लिएर पाएजति फिल्म खेलौँ भन्ने सोच हाबी छ,” वितरण कम्पनी स्टेसन फाइभका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा फिल्म निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठ भन्छन्, “तर एउटा फिल्मलाई एक महिना पनि दिँदैनन् । त्यसैले कलाकारको पर्फमेन्स र फिल्मको गुणमा ह्रास आएको देखिन्छ ।”
नेपाली फिल्मको बजारबारे जानकार श्रेष्ठ अनमोलबाहेक अन्य हिरो/हिरोइनमा खास स्टारडम देख्दैनन् । न चर्को पारिश्रमिक तिरेको हिरो/हिरोइनको स्टारडम ‘क्यास’ गर्ने कुनै योजना नै हुन्छ, निर्मातासँग । अहिले ‘लाइमलाइट’ मा नरहेका हिरो रमित ढुंगानाले समेत नयाँ फिल्मबाट १८ लाख रुपैयाँ लिएको मिडियासँग बताए । जयकिसन बस्नेतले त उहिल्यै आफ्नो पारिश्रमिक २२ लाख रुपैयाँ पुगेको घोषणा गरेका थिए ।
बजार र कलाकारको पारिश्रमिकको समीकरणलाई केलाइरहँदा अर्को एउटा तथ्य भुल्न मिल्दैन । हामीकहाँ हरेक वर्ष करिब ८० प्रतिशत नयाँ निर्माता आउँछन् । कोही फिल्म बनाउनै विदेशबाट यहाँ आउछन्, कोही यहीँ अन्य व्यवसायबाट आर्जन गरेपछि फिल्ममा पैसा हाल्छन् । कसैलाई कलाकारसँग घुम्ने रहर हुन्छ, कसैलाई नाम कमाउने त कसैलाई निर्माताका रूपमा ‘प्रोफाइल’ बनाउने । फिल्म निर्माणलाई नै निरन्तरता दिने ध्येय कमैको हुन्छ ।
निर्माता उदयको अनुभवमा यस कोटिका नवनिर्माता फिल्मको आय/व्ययबारे बेखबर हुन्छन् । कतिपयलाई व्यापारको गलत तथ्यांक देखाएर फसाइएको हुन्छ । भन्छन्, “यस्ता निर्माताले जसले जति भन्यो, खर्च गर्छन् । भोलि लगानीको एक चौथाइ आउँदैन । त्यसैले अर्को फिल्म बनाउनै सक्दैनन्, हराउँछन् ।” नेपाली फिल्मवृत्तमा यस्ता निर्मातालाई ‘पटके’ र ‘मुर्गा’ उपमा दिइन्छ ।
निर्माताको अर्धबुझाइ त छँदै छ, सँगै कलाकार न्यून भएकाले पनि पारिश्रमिक मनोमानी ढंगले बढेको तर्क गर्छन्, स्टेसन फाइभका श्रेष्ठ । चकलेटी हिरोमा अनमोल, प्रदीप, पल अनि फरक भूमिकाका लागि विपिन कार्की, दयाहाङ राई, सौगात मल्लको विकल्प छैन । नयाँ कलाकार खेलाउने ‘रिस्क’ गर्दैनन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाली फिल्ममा प्रतिभाको पोखरी सानो छ । त्यसैले चलेका कलाकारले जति माग्छन्, दिनुपर्ने हुन्छ । अडिसनबाट क्षमतावान् कलाकार छान्ने संस्कार हामीकहाँ छैन ।”